Mwepụta nke Akaụntụ Tourism Satellite maka Saint Lucia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mwepụta nke Akaụntụ Tourism Satellite maka Saint Lucia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ okomoko • News • Safety • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Lulọ nkwari akụ na njem nlegharị anya nke St Lucia Onye isi ala Noorani M. Azeez taa kwupụtara mwepụta nke Akaụntụ Tourism Satellite maka mba ahụ.
Saint Lucia bụ mba agwaetiti Caribbean nke nwere ọmarịcha ugwu, Pitons, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ ya. Coastsọ osimiri ya bụ ebe e nwere ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ, ebe ndị a na-egwu mmiri, ebe a na-enwe ọmarịcha nri, na obodo ịkụ azụ. Zọ ụkwụ dị n’ime mmiri ozuzo dị n’ime mmiri na-eduga na nsụda mmiri dị ka Toraille 15m-elu, nke na-asọba n’elu ugwu n’elu ogige. Isi obodo, Castries, bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-ewu ewu. Saint Lucia Tourism bụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na St.Lucia
Ebumnuche ndị bụ isi nke satịlaịtị na-atụ aro akaụntụ na-adabere na njikwa zuru oke dị n'etiti akụ na ụba n'etiti ọchịchọ maka ngwaahịa ndị njem na njem ha na-eweta.
TSA si otú a na-enye ohere maka nkwekọ na idozi ọnụ ọgụgụ nke ndị njem site na ọnọdụ akụ na ụba (Akaụntụ Mba). Nke a na - enyere ọgbọ nke data data njem nlegharị anya (dịka Tourism Direct GDP) nke a ga - eji tụnyere ọnụ ọgụgụ akụ na ụba ndị ọzọ. Kpọmkwem otu TSA si eme nke a metụtara echiche SNA nke iche data sitere na mpaghara chọrọ (nnweta ngwaahịa na ọrụ ndị ọbịa mgbe ha na njem njem njem) yana data sitere na ntinye akụ na ụba (uru nke ngwaahịa na ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-emepụta na mmeghachi omume mmefu ndị ọbịa).
Enwere ike ịhụ TSA dịka tebụl nchịkọta 10, nke ọ bụla nwere data ha na-akpata:
Bo inbound, njem nlegharị anya ụlọ na mmefu njem njem,
Mmefu ihe eji eme njem,
♦ Mmeputa ihe omuma banyere oru ndi njem,
Gross Value Added (GVA) na Gross Domestic Product (GDP) nke ndị njem kpatara,
♦ itinye ego,
Consumption oriri nke gọọmentị, na
Ego anaghị egosi.
Onye isi oche SLHTA Noorani M. Azeez kwuputara echiche ya na mwepụta nke satịlaịtị na akaụntụ om Saing Lucia taa na Hewanorra House, Sans Souci, CASTRIES:
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke nyocha na nyocha, ọtụtụ achọpụtala na Caribbean bụ mpaghara kachasị njem njem na ụwa. Ndi ulo oru ndi mmadu na ndi mmadu ndi sitere na World Travel and Tourism Council, Caribbean Tourism Organisation na Caribbean Hotel na Tourism Association emeela nkwuputa ndi a n'otu oge ma obu ozo, ha nile iji bulie mkpa ulo oru a na-adọta ndi ozo. itinye ego, imepụta ọrụ, ịzụlite njikọta yana mmekọrịta mmekọrịta na-akpali akpali n'etiti ndị ọrụ ọha na eze na nke onwe ha maka uto akụ na ụba na mmepe.
N’ime afọ iri gara aga, onye isi ụgbọ ala Caribbean a gosipụtara nnagide ya na nsogbu akụ na ụba na ihu igwe, na-enye ohere oge mgbake ngwa ngwa maka obere agwaetiti na-emepe emepe nke oke ifufe na ọdachi ndị ọzọ na-emebi. N'agbanyeghị ajọ ifufe, ala ọma jijiji na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'akụkụ ụfọdụ, uru nke njem bụ ugbu a enweghị mgbagha. Ma gịnị banyere ụgwọ ndị metụtara ịdabere na nke a?
Ka ndị njem na-etolite na akụnụba na mmekọrịta anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta dị egwu mgbe niile, anyị ga-etinyezi echiche anyị ugbu a n'ọbara dị elu. Njem nlegharị anya ọ ga-enyere ndị ntorobịa anyị aka ịkpata akụ na ụba? Ndi njem nleta nwere ike inye ndi oru ike na ndi nwere oke aka ikike iji nweta ma bie ndu ndu nke etiti? Njem nlegharị anya ọ nwere ike ịzụlite mmepe azụmaahịa obere? Ndi njem nlegharị anya enwere ike inyere anyi aka ịhapụ omenala, nka, gburugburu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ụmụaka ụmụaka anyị?
Ọ bụ naanị site n'ịtụle uto a na ịdabere na ntụkwasị obi n'ụzọ ziri ezi ka anyị nwere ike ịma nke ọma, ihe ezi mmetụta nke njem bụ n'ezie, na, naanị site na ịlele njem nleta n'ụzọ ziri ezi ka anyị nwere ike ijide ọgụgụ isi iji mee ka ihe ọhụrụ na ihe okike pụta iji wepụ nkwa nke njem.
Akaụntụ Satellite nke njem nlegharị anya (TSA) abụrụla onye na-ebu ọkọlọtọ na ngwa ọrụ kachasị maka mmụba akụ na ụba nke njem. Ndi otu World Tourism Organisation (UNWTO), United Nations Statistics Division na mmadu ole na ole ndi ozo zuru uwa, TSA nyere ohere ka ha kwekorita na onu ogugu onu ogugu ndi njem, na enyere anyi aka ichota ihe ndi ozo na oru nke ndi nleta na ulo. nke ngwongwo na oru iji mezuo ochicho a. Anyị amatala na mmụba na mbata bụ otu ihe mana uto na mmefu nke ndị ọbịa nwere ike bụrụ ihe ọzọ.
Achọrọ m ịja Mịnịstrị na-ahụ maka njem nleta, ozi na Mgbasa Ozi, Omenala na ụlọ ọrụ okike na ndị ọrụ ngalaba ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ọnụ maka mbọ ha na-eme ka njem Satellite Satellite Account anyị bụrụ eziokwu.
Ma ugbu a ọ bụ eziokwu, kedu ka anyị ga - esi mee ya ọganiihu?
Nkwado nke ndi oru na itinye aka na aka bu uzo di nkpa nke uzo iji hu na oganihu.
Site na ịnye na nyochaa data, anyị nwere ike ịkọwa onyinye nke oriri ndị ọbịa na akụnụba anyị. Site na nghọta nke ọma banyere usoro oriri ndị a, anyị nwere ike kpalite ọhụụ nke ụlọ ọrụ aka, ihe okike na mgbanwe. Nke a na - akpali ndị ọrụ ọha na eze ime ihe iji nweta ihe onwunwe na ego maka atụmatụ amụma njem nleta ọhụrụ. Ha na ndi ulo oru ndi mmadu na ndi mmadu nwere ike ime ka mmekorita a di nma iji dozie ihe ndi mmadu na aku na uba na atumatu ahia.
Ihe karịrị otu afọ gara aga, ndị SLHTA zara oku site n’aka ndị mịnịstrị na-ahụ maka njem maka ịkekọrịta echiche anyị maka iwebata TSA. Ndị otu SLHTA ji ịnụ ọkụ n'obi zukọta iji ghọtakwuo ọrụ dị na ya wee nye nkwado anyị maka ụzọ ahụ. Ruo taa, mkpebi a agbanwebeghị. SLHTA nwere nlezianya na nyocha nke data TSA ma ghọta otú nke a nwere ike isi nyere anyị aka melite arụpụta ọrụ, na-eto asọmpi anyị ma melite atụmanya ọrụ maka ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nleta.
N'ọtụtụ ọmụmụ gbasara mmetụta nke TSA, a rụpụtara mmekọrịta na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ihe dị mkpa na-eweta ihe ịga nke ọma na njide data na mgbanwe ozi. Mmekorita ndi mmadu na ndi mmadu n’ahia bu ihe di nkpa banyere uzo nke ndi njem.
Anyị na-atụ anya na TSA ga-aga n’ihu na-eto ma bụrụ akụkụ nke sistemụ Akaụntụ Mba anyị na-agba ume na njikọta ọtụtụ ebumnuche na atụmatụ dị iche iche.
Ihe ịma aka anyị kachasị ga-agbagha gụnyere nnweta nke data data, oge ha na ntụkwasị obi ha. Agbanyeghị, dịka anyị gbara mbọ ka anyị na-emekọ ọnụ iji nweta data ahụ, anyị ga-ekpebisi ike ịkekọrịta nchọta ahụ. Site n'ime nke a, ọ ga-adịrị anyị mfe ikwu eziokwu na ike ma tinye aka na mkpebi siri ike achọrọ iji nweta akụnụba e kere eke nke ile ọbịa na njem nleta.
Banyere Noorani Azeez:
Onye isi SLHTA Noorani Azzez
Noorani Azeez n'okpuru pọtụfoliyo ya ugbu a dị ka Chief Executive Officer na St. Lucia Hospitality and Tourism Association (SLHTA), boro ya ebubo na mmepe nke atụmatụ achọrọ na ịhazigharị usoro nhazi na usoro iji hụ na ọrụ na-aga n'ihu na njem. nkwado na mmụba nke arụ ọrụ na Association na ndị otu ya.
N’okpuru ọtụtụ ọfịs n’ime afọ itoolu gara aga, Noorani kwadoro ma duzie okike na njikwa nke ọma:
SLHTA's Tourism Enhancement Fund nke kwadoro ihe karịrị narị otu narị arụ ọrụ iji wulite ntụkwasị obi nke obodo, kwado nchedo gburugburu ebe obibi yana igosi njikọ n'etiti njem na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Hospitallọ Ọgwụ nke zụrụ ihe karịrị ndị ọrụ njem njem njem 700 n'oge afọ mmalite ya na 2017
Locallọ Ọrụ Mmụta Asụsụ Mba Ọzọ na mpaghara yana mmekorita ya na Embassy nke Mexico na Mahadum nke Quintana Roo
Mmemme Hospitallọ Ọrụ nke Hospitallọ Ọrụ nke Ndị Ntorobịa nke nyere ọzụzụ maka njem nleta maka ihe karịrị 550 ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ na-achọ ọrụ ile ọbịa.
Facilitylọ ọrụ na-ekpochasị Agriclọ Ọrụ Virtual Agricultural nke na-eji ihe ngwugwu nke App dị ka ebe ịzụ ahịa maka ndị ọrụ ugbo na ndị ọbịa. Ihe kariri ndi oru ugbo 400 na ulo oru iri na abuo na-esonye na mmemme a nke na-ebute ahia nke ihe ruru nde dolla abuo nke ihe ubi na-eto n'ime afo mbu nke oru. Ihe oru ngo a meriela onyinye mba uwa kacha mma na nnabata site na CHTA na WTTC.
Gwa ụlọ ọrụ nke SLHTA Group Insurance Medical Insurance Plan maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ site na SLHTA iji nye ohere ịnweta mkpuchi ahụike maka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ha enweghị ike ịnye ha mkpuchi. Ruo ugbu a, ndị ọrụ 2000 na-esonye na mmemme a nke nwere nnukwu uru karịa atụmatụ ndị ọzọ dị na mpaghara maka obere ego.
Tupu ya abanye na SLHTA, Noorani jere ozi dị ka Ọzụzụ na Onye njikwa maka Sandals Resorts International. Ọrụ ya na ọkwa a gụnyere ịme ọzụzụ mkpa ọzụzụ nke ndị otu na inye ọzụzụ na nduzi nye ndị ọrụ akara na ndị ọkachamara njikwa n'ọtụtụ ebe, ma na mpaghara ma na mpaghara, iji hụ na ịdị n'otu na nnyefe ọrụ.
Tupu nke a, ọ rụrụ ọrụ dị ka Onye isi njikwa na National Skills Development Center Inc. (NSDC) ruo ihe karịrị afọ ise. Na NSDC, ọ bụ ya kpara mkparita uka maka inye onyinye nke ndị nyere onyinye ma jikwaa ọrụ maka ịzụ ndị ntorobịa enweghị ọrụ na ile ọbịa na ngalaba ọmụmụ ndị ọzọ.
N'ịbụ onye ruru eru na nchịkwa na nchịkwa azụmahịa na ahụmịhe dịka onye mmepe mmepe na njikwa njikwa, Noorani na-agbakwụnye uru maka mbọ nkwụsi ike nke obodo, mmepe nke ụlọ ọrụ na mmepe mba site na nka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, njikwa ọrụ nhazi na arụmọrụ na-adịghị mma. Ohere iji mee ka mmepe zuru oke nke obere agwaetiti na-emepe emepe na-emetụta obodo anyị bụ mgbalị ndị na-emeghe agụụ ya.
Ozi ndị ọzọ na Saint Lucia.